Fanatsarana trano - Magcrible mampino
Ny lamin'ny fanadiovana fanamboarana
Jolay 27, 2020 Aprily 22, 2021
Ireo mpanadio fampandrosoana dia afaka manova haingana ny tranokala tsy madio ho lasa fialofana sy toerana madio. Ny fomba fiasan'ny fanadiovana fampandrosoana dia mahamenatra kokoa noho ny asa fanadiovana mahazatra noho ny hevitra ireo fitaovana fandroahana amin'ny toeram-piasana sy…
Toro lalana hametrahana mpamily lalana
Jolay 14, 2020 Aprily 13, 2021
Ny fametrahana ny pavers driveway dia asa goavana. Na mikasa ny hametraka biriky, beton na pavers vato ianao dia mila mpanamboatra lalana. Misy dingana hafa koa izay hanampy anao hametraka pavers driveway. Raha mikasa ny hametraka azy amin'ny maha-matihanina ianao dia…
Tombontsoa amin'ny fitafiana
Amin'ny maritrano, rindrina mitafy na rindrina ivelany, dia natao hametahana fitaovana hazo iray amin'ny iray hafa ho an'ny tanjona kanto sy miasa. Ny firakotra dia ampiasaina ho toy ny fifehezana mba hiarovana ny trano amin'ny singa. Anisan'ireo karazan-pitaovana amin'ny sisiny ny hazo, plastika (na…
Ny fitambaran'olona dia matetika no raisina ho toy ny mpameno inert, izay mahatratra 60 ka hatramin'ny 80% ny lanjan'ny haben'ny beton ary 70 hatramin'ny 85% ny lanjany. Ny singa dia mizara ho karazany roa: marokoroko sy tsara. Matetika dia lehibe kokoa noho ny…
Raha mitady fitaovana fitahirizana kalitao ianao, dia ampirisihinay hijery ny boaty fitahirizana aliminioma. Aza hadino ny mividy amin'ny manam-pahaizana manokana amin'ity faritra ity ary mampiasa fitaovana fananganana avo lenta. Tsy mety ny mividy amin'ny mpivarotra tsy fantatra satria ity…
Karakarao ny tanky septic: faritra iray sarotra ao an-trano izay mila fikarakarana tsara indrindra
Fantatrao ve fa tompon'andraikitra amin'ny fikolokoloana ny rafitra septika fonenanao ianao? Ny rafitra septikao no anjaranao! Raiso izany ary tadidio ao an-tsaina foana mba hahatratrarana ny rafitra septic maharitra sy mahomby, mampihatra vitsivitsy amin'ireo fitsipika…
Misafidy ireo mpifaninana tsy misy rano ho an'ny tetik'asa an-trano
Ny trano dia fampiasam-bola indray mandeha. Mila mitandrina ny fanamboarana sy ny fikojakojana azy ny olona satria eto no handaniany ny andro sisa amin'ny fiainany. Ny fitazonana ny tranonao amin'ny toerana tsy azo antoka, indrindra any amin'ny firenena izay misy…
Torohevitra ambony amin'ny fikojakojana ny fiakarana: mitantana ny olan'ny fiasan'ny ascenseur
Raha heverina ny fampiasam-bola lehibe, ny ascenseur an-trano dia tsy isalasalana fa ny fitaterana mekanika manome toky indrindra hisorohana ny tohatra. Tsy toy ny tohatra, ny fitrandrahana dia mila fikojakojana sy servisy faratampony mba hilazana ny fenitra fiarovana. Mba hanitarana ny fiainana sy hampihenana ny delestazy, tsy maintsy ilaina ny manaraka a…
Hevitra avo 4 ho an'ny efitranon'ny zanakao: ampio aingam-panahy sy fialamboly
Ny fanaingoana sy ny famolavolana ny efitranon'ny zanakao hamoronana toerana falifaly sambatra dia filàna tsy azo ihodivirana. Inona no azonao atao amin'ny efitranon'ny zanakao? Izay vinavina rehetra! Raha ray aman-dreny tia teti-bola ianao na mino ny fanodinana na fanavaozana, manandrama mankafy bebe kokoa…
Momba ny fanamboarana fantsona varahina
Ny milina miatrika no fitaovana fantsom-panafahana azo zahana indrindra amin'ny fampiharana rano mafana na mangatsiaka. Ireo fantson-drano ireo dia azo alefa amin'ny rafitra isan-karazany, ao anatin'izany ny horonan-taratasy miforitra sy ny fantsona mahitsy amin'ny refy miovaova. Ny fantsom-by dia fantatra amin'ny fanoherany mafy…